Québec: Bandowga habeenkii, xannibaado cusub ayaa bilaabanaya berri
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Québec: Bandowga habeenkii, xannibaado cusub ayaa bilaabanaya berri
Xaaladda socota iyo saamaynta tallaabooyinka ayaa si dhow loola socon doonaa. Haddii loo baahdo, tallaabooyin dheeraad ah oo gaar ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka aan si ku filan loo ilaalin, kuwaas oo ku xisaabtama saamiga ugu badan ee isbitaallada hadda, ayaa lagu dhawaaqi karaa.
Quebec Premier François Legault, oo uu weheliyo Wasiirka Caafimaadka iyo Adeegyada Bulshada Christian Dubé, ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dheeri ah oo dhaqan geli doona Diisambar 31, 2021, 5 galabnimo si loo xakameeyo koritaanka faafitaanka fayraska. Waxa intaas dheer, Premier Legault wuxuu ka codsaday dhammaan shaqaalaha shabakadda caafimaadka ee ka tagay inay soo noqdaan oo ay gacan siiyaan maalmaha soo socda.
Tirada kiisaska togan ee la xaqiijiyay ayaa sii kordheysa waxaana aad looga walaacay kororka isbitaalada la seexiyay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Tallaabooyin ku meel gaar ah oo aan caadi ahayn waa in lafuliyaa si looga fogaado in ay sii xumeeyaan xaaladda isbitaallada iyo in la xaddido miisaanka dib u dhaca.
Tallaabooyinka soo socda ayaa lagu darayaa kuwii hore u jiray:
Bandowgu wuxuu dhaqan galayaa 10-ka habeenimo ilaa 5-ta subaxnimo
Quebecers, sidaas darteed, waa laga mamnuuci doonaa inay ka baxaan guryahooda marka laga reebo kiisaska marmarsiiyo safarka, sida si ay u helaan daryeel caafimaad, sababo bini'aadantinimo, ama inay galaan shaqada mudnaanta leh.
Qof kasta oo safraya inta lagu jiro muddadan waxaa laga yaabaa inuu ku caddeeyo safarka noocaas ah ee la xidhiidha ka-reebitaanka la oggol yahay.
Dembiilayaasha waxaa lagu mutaysan doonaa ganaax u dhexeeya $1 000 ilaa $6 000.
Kulamada gaarka ah ee gudaha waa inay ku koobnaadaan dadka degan isla guriga.
Wax ka reebis gaar ah ayaa dhici karta:
booqdaha bixiya adeeg ama bixiya taageero;
shakhsi keli ah (oo wata caruurtiisa ama keeda, haddii ay khuseyso) waxay ku biiri karaan xumbo qoyska.
Susan Miller wuxuu leeyahay,
Janaayo 1, 2022 markay tahay 19:49
Markaa Quebec waxay dhaqan gelinaysaa bandow habeenkii ah oo xaddidan laga bilaabo maanta, iyo dhowr borotokool kale oo adag oo adag. Huh.
Tixraac hal daqiiqo oo keliya ciwaannada maqaallada ee duntan gaarka ah. Isla markiiba ka dib sheekada ku saabsan waalida Quebec, waxaa jira akhrin kale oo xiiso leh oo ku saabsan jawaabta Koonfur Afrika ee " duwanaanta Omicron." Waxay ku dhacaan inay kor u qaadaan bandowgooda habeenkii oo ay dejiyaan dhammaan borotokoolka xakameynta Covid, waxayna soo tebiyaan in Omicron laga yaabo inuu si dhakhso leh u faafo, laakiin marka la barbar dhigo "asalka" dillaacay, nooca caabuqa wuxuu ahaa mid dagdag ah oo sababay kaliya qayb yar oo ka mid ah isbitaalladii asalka ahaa. .
Waxaan sharxayaa in Quebec ay leedahay boqolkiiba boqol aad uga sarreeya muwaadiniinta Caucasian marka loo eego Koonfur Afrika, laakiin waxaa noo sheegay Dr. Fauci (kuwo kale), in midabka maqaarkaagu sii madoobaado, ay sare u qaaddo halista aad ugu qaadi karto calaamadaha halista ah ee Covid. (Taasi waa sababta oo ah heerka nuugista iftiinka qorraxda, btw; shaqo kuma lahan siyaasaddaada.)
Dunidu way waalantay. Australiya waxay horumarinaysaa wax u dhigma deegaanada baraska qaba ee dadka laga helay cudurka; loogu talagalay dadka TIJAABISTA togan-taasoo noqon doonta tiro aad u badan oo sideyaal ah oo aan weligood yeelan astaamo. Taasi waa run cudurro badan-laakin halkan waxaan mar kale dadka si fiican u gelineynaa karantiil. Haddi aanad qabin fayraska ka hor inta aanad tagin deegaanka raaxada leh, waxa hubaal ah in aad qaadid ka dib imaanshaha.
Sida muuqata dawladdaydu aad uma lihid (wali), laakiin dhammaantood waxay u muuqdaan inay haystaan ​​ganacsigoodii ugu horreeyay ee wax soo saarka degdegga ah ee dadka aamusan, is-hoosaysiinta, iyo cabsida. Waxaan u bixi doonaa addin oo waxaan ugu yeeraa shuuciyadda.
Ma ihi jaahilnimo si aan u rumaysto in Covid-ku aanu run ahayn, oo malaayiin ay u dhinteen. Aniga qudhaydu waan haystay oo ma ay ahayn cunto-doon. Laakiin ma doonayo inaan cabsi ku noolaado, oo gurigayga yar ku sii jiro, oo aqoonsigayga lumin maayo anoo wejigayga qarinaya mar kasta, oo dawladdana ilaahey kama dhigi doono. Halkan waxaa sidoo kale jira ajande.
Haddii aad rabto tallaalka, ganaax. Haddii aad go'aansato diidmo, ganaax. Waan simbiriirixan karaa oo aan ku dul dhici karaa barafka dibadda ka soo dhacaya hadda oo aan dabaylo qalliinka ku jiro. Waxa aanu goynaynaa kuwa doorta in aanay is-tallaalin – midkaas ama waanu ka cayrinaynaa. Ma aanan helin xitaa waqti aan ku baranno horumarka jirkeena ee difaaca dabiiciga ah, inkastoo aan ognahay in ay jiraan wax halkaas. Waxaa jirta sabab uu waalidkaa kuugu oggolaado inaad wasakhda ku ciyaarto markaad caruur ahayd. Haddi aynaan joojinin qarinta, oo aynaan mar dambe ku milmin dad badan, oo aan qaadano tallaal kasta oo "alfa-through-omega" ah iyo tallaal xoojin ah, waxaan noqon doonnaa duni aad u buka runtii-dhan kasta.